Azo atao ve ny mividy backlinks amin'ny GOV?
Raha ny momba ny backlinks mahery vaika avy amin'ny tranonkala governemanta sy ny blôgy, dia zavatra iray tokony ho takatrao aloha sy voalohany. Ny zavatra dia ny tsy ahafahanao mividy ny GOV backlinks, afaka mahazo azy ireo ianao. Izany no mahatonga ahy etsy ambany hampiseho aminao ny dingam-pivoarana ireo rakitra goavam-be ireo amin'ny fomba maro nampiasaina efa notsidihiko vao haingana tamin'ny tranokalako manokana. Ary izany dia asa iray tena mandany fotoana be dia be, tokony hiaiky aho. Saingy mbola te hankafy ny fahefany matanjaka ianao, sa tsy izany? Toy izao ny fomba ahafahanao mividy backlinks amin'ny GOV - mampiasa ny fotoananao sy ny ezaka amin'ny iray amin'ireto manaraka ireto: fanehoan-kevitra momba ny bilaogin'ny governemanta, manoratra momba ny orinasam-panjakana na vondron'olona mifandraika, manadinadina mpandraharaha iray na mpikambana ao amin'ny fiarahamonina, fananganana pejy loharanom- ary koa saro-balala saro-bidy mba hahazoana an'ireny rakitra mendrika ireny ho setrin'izany. Noho izany, andeha isika hamerina hijery ny tranga tsirairay izay afaka mamela fanampiana hividianan-doka ny GOV - mandoa amin'ny asa ataonao amin'izany.
Fanehoan-kevitra amin'ny blaogin'ny governemanta
Mametraka fanehoan-kevitra momba ny bilaogy GOV ny GOV dia anisan'ny fomba mahazatra indrindra hahazoana mivantana ny governemanta. Toy ny fanehoan-kevitra hafa any amin'ny aterineto anefa, ny asa dia tsy tsotra tahaka ny toa eritreretina voalohany. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza. Noho izany, tsy maintsy mandany fotoana be ianao mba hahitana ny kandidà mety indrindra mba hahazoana rohy fanamarihana. Izany no asa sarotra indrindra eto.
Manoratra momba ny Fikambanana na Vondana iray mifandray
Ataovy bebe kokoa ny tranokalanao na ny blôginao - manorata lahatsoratra lehibe momba ny orinasam-panjakana na ny vatany mifandray. Azonao atao ihany koa ny manoratra momba ny mpanao politika iray - ny fanadinadinana mpikambana iray misahana ny serivisy, na ny mpitarika ny fiaraha-monina goavana dia fomba iray azo ampiasaina mba haka ny rindrankajy sasany. Ohatra, ny famoronana lahatsoratra nika na fifanakalozan-kevitra ao amin'ny sehatry ny angovo dia mety ho fanapahan-kevitra tsara ho an'ireo izay manorina tranon'omby, fitaovana maoderina, na mandray anjara amin'ny indostria orinasa hafa na amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ireo izay mifehy, ohatra, amin'ny simia na pharmacy dia afaka mahita lalao tonga lafatra amin'ny orinasa momba ny tontolo iainana momba ny tontolo iainana, na ny fikarakarana ara-pahasalamana ataon'ny governemanta.
Agentur Interviewing or Member Community
Ny ankamaroan'ny fomba fitsaboana, ny fanadinadinana mpanao politika iray na ny mpiofana akaiky akaiky dia tsara ihany koa ny manangona backlinks avy amin'ny toerana. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny hampahafantatra ilay olona nifanakalozan-kevitra ary efa nanomana mialoha ny zavatra rehetra - alohan'ny nanombohanao niasa tamin'ity lahatsoratra sarobidy ity ary farany haka rohy mankany amin'ny tranokalanao na bilaogy. Soso-kevitra: eritrereto ny fisafidianana ny lalàna novolavolaina vao haingana izay mety hisy fiantraikany amin'ny tetikasanao amin'ny aterineto na ny orinasa amin'ny ankapobeny.
Fananganana pejy fananganana
Miankina amin'ny niche, ny fananganana pejy loharanon-kevitra dia mety ho lasa vahaolana azo antoka. Indraindray aho, ohatra amin'ny orinasa eo an-toerana, mihevitra ny mamorona pejy loharanon-kevitra mba hanome fampahalalana azo antoka momba ny lalàna eo an-toerana na fitsipika ofisialy izay mety ho an'ny mpampiasa eo an-toerana. Diniho koa ny lisitry ny loharanom-pejy efa misy efa mahazatra ao amin'ny tranonkala maro.
Fa ny fandokoana dia efa azo antoka sy azo antoka foana hividianana rindran-damina amin'ny GOV avy amin'ireo andrim-panjakana. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mahita ireo dian-kitsim-pahamendrehana tena manan-danja indrindra - ary farafaharao fotsiny amin'ny votoatinao izay tianao henoina. Mazava ho azy, tsy maintsy manana ny fahatsapana marina ianao - ary mampiroborobo ny sombin-tsokinao araka ny faniriana araka izay azonao Source .